Eswatini tratra teo anelanelan'ny Taiwan sy Shina dia midika loza lehibe
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Eswatini tratra teo anelanelan'ny Taiwan sy Shina dia midika loza lehibe
Birao fizahantany afrikanina • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao Mafana Taiwan • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Rehefa miha mahazo vahana ny fanjakana milamina any Afrika dia azo inoana fa misy antony lehibe kokoa. Ao amin'ny Fanjakan'i Eswatini dia mety ny fifandonana ao China Taiwan. Tian'i Shina ny governemanta vaovao any Eswatini - ary mety izao no fotoana hanaovan'ity goavam-be kominista ity majika.
Ny toe-javatra milamina ankehitriny ao Mbabane renivohitr'i Eswatini misy fivarotana mihidy sy arabe foana no mety hangina alohan'ny tafio-drivotra tonga lafatra.
Raha ny loharanom-baovao dia misy hery ivelany mitondra bala any amin'ny renivohitra Eswatini.
Ankoatry ny tanora mpanao fihetsiketsehana te-hanana fahefana bebe kokoa amin'ny firenena, mety misy hery lehibe miasa any aoriana. Ity fahefana ity dia mety ho ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina.
Walter Mzembi, minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha ho an'ny Zimbabwe ary mahalala ny jeopolitika any Afrika dia mieritreritra fa manana antony marobe i Shina raha tsy eo intsony ny Mpanjaka Eswatini.
Tsy kisendrasendra fotsiny ny fananganana Etazonia iray amin'ireo masoivoho lehibe indrindra eto an-tany amin'ity firenena kely Eswatini ity. Ny antony dia ahitana an'i Taiwan sy Sina.
Ny fanontaniana lehibe kokoa dia ny any Shina sy ny fanirian'ity firenena matanjaka eran-tany ity mba hampihena ny ambaindain'ny faritany nandositra azy Taiwan, izay fantatra ihany koa amin'ny hoe Repoblikan'i Sina.
Governemanta vaovao any Eswatini no azo antoka fa hifindra amin'ny fanekena ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina amin'ny Repoblikan'i Sina, fantatra amin'ny anarana hoe Taiwan. Tian'i Sina izany - ary zava-dehibe ho an'ity firenena mahery vaika kominista ity. Eswatini no hany firenena afrikanina manana fifandraisana diplomatika amin'i Taiwan.
Noho izany dia mety tsy kisendrasendra ny nanamafisan'ny Antoko Kaominista an'i Eswatini androany fa nandositra ny fireneny ny mpanjaka, Mpanjaka Mswati III ary nilaza fa tany Johannesburg, Afrika Atsimo no voalaza fa tany. Ny fihetsika mandà ny praiminisitra izany.
Voalaza fa niainga tao afovoan'ny fihetsiketsehana mpanohana ny demokrasia ny fanjakana 1.16 tapitrisa tao anatin'ny andro vitsivitsy.
Eswatini dia mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana, ny Commonwealth of Nations, ny Vondrona afrikanina, ny tsena iraisana ho an'i Afrika Atsinanana sy atsimon'i Afrika ary ny any Botswana Community Community Afrikanina Tatsimo.
Ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina dia fantatra fa manana fitaomana lehibe amin'ny SADC. Ny sasany milaza fa very andraikitra ny Community South Africa Development Community, nanelingelina an'i Sina.
Ho an'ny governemanta sinoa dia mazava ny tombony azo amin'ny fiaraha-miasa amin'i Afrika. Nampiasa ny fampiasam-bolany tany Afrika i Sina mba hahazoana fidirana amin'ny loharanon-karena lehibe midadasika ao amin'ny kaontinanta, ao anatin'izany ny solika, metaly sarobidy ary mineraly manandanja amin'ny famokarana teknolojia mipoitra toy ny batterin'ny fiara elektrika.
I Afrika koa dia maneho tsena manintona ho an'ny orinasa mpanorina an'i Shina, izay miatrika fahaiza-manao be loatra ao an-trano ary maniry fatratra ny hahita toeram-pivarotana vaovao.
Na izany aza, imbetsaka ny tombontsoa azo avy amin'ireto tetikasa ireto dia tsy mikoriana amin'ny mpiasa afrikanina misimisy kokoa. Ny famatsiam-bola ataon'i Shina amin'ireo tetik'asa fotodrafitrasa any Afrika dia matetika koa miaraka amin'ireo takiana mba hisafidianan'ny firenena mpampindrana sinoa mpamatsy sinoa, ka manasarotra ny fidiran'ny firenena hafa, anisan'izany i Etazonia, ny tetik'asa fotodrafitrasa any Afrika.
Beijing dia afaka nanararaotra ny fifamatorany tany Afrika ho fanohanana ny
sehatra iraisam-pirenena. Ohatra, nampiasa ny fisiany tany Afrika i Shina mba hanasaraka an'i Taiwan amin'ny lafiny diplaomatika. Ny firenena afrikanina rehetra, ankoatr'i Eswatini, dia nanaiky an'i Beijing mihoatra an'i Taipei. Naneho ny fanohanany ny fitakiana faritanin'i Beijing ao amin'ny Ranomasina China South ihany koa ireo mpitarika afrikanina ary nanao fanambarana ampahibemaso ho fanohanana an'i Beijing nandritra ny fihetsiketsehana tao Hong Kong tamin'ny taona 2019.
Mifangaro ny vokatr'izany aty Afrika. Na dia tena mila izany aza i Afrika
fotodrafitrasa izay mbola tsy voavaha, ireo tetik'asa izay vinan'i Shina matetika dia voafantina amin'ny alàlan'ny fomba manjavozavo, mampitombo ny olan'ny kolikoly. Ankoatr'izay, ny famatsiam-bolan'i Shina dia misy vidiny, izay miteraka fananganana trosa tsy maharitra amin'ny firenena afrikana maro.
Ireo fomba fampindramambola ireo dia nanjary fiampangana ny fanjanahan-tany vaovao, ary taorian'ny fihemoran'ny toekarena nateraky ny valan'ny COVID-19 dia nitaky fangatahana trosa ny firenena afrikanina.
Tsy nangina intsony i Shina tamin'ireny fangatahana ireny, ka nametraka ny fanontaniana raha
Etazonia sy ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena hafa no sisa tavela amin'ny volavolan-dalàna.
Raha nampahafantatra ny ezaka momba ny fahasalamam-bahoaka any Afrika i Shina nandritra ny
Areti-mifindra COVID-19, afrikanina maro no misalasala ary naneho ny ahiahiny fa mety tsy dia tsara kalitao ny fitaovana natolotry ny sinoa.
Ny Fanjakan'i Eswatini dia iray amin'ireo firenena 15 manaiky ny Repoblikan'i Sina, fantatra ihany koa amin'ny hoe Taiwan Io no hany firenena any Afrika izay tsy manana fifandraisana diplomatika amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina.